October 17, 2020 - Online Hartha
October 17, 2020 by Online Hartha
မိုးရှာပွီးတဲ့အခြိနျ ဗှကျအိုငျထဲမှာ ဆော့ကစားနတေဲ့ ကလေးငယျကို မိခငျဖွဈသူက ရိုကျဖို့ တုတျကိုငျပွီး သှားလိုကျသောအခါ.
အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက် (၁) အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ အိပ်ခြင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အိပ်စက်သည့်အချိန်သည် သာမန်လူများ အိပ်စက်ချိန်ထက် ပို၍ တိုတောင်းသောကြောင့် သင့်ကို အိပ်ရေးပျက်စေပါတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အမွှေးများကလည်း သင်၏ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် …။ (၂) ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်း ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့အပြင် ရေနွေးပူကို (၁၀)မိနစ်လောက် ပို၍ ကြာကြာစိမ်ချိုးပါကသင်၏ သဘာဝအပေါ်ယံ အရေပြားကို ထိခိုက်စေပါတယ် …။ (၃) စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်း အိပ်ရာမဝင်ခင် သတင်းကြည့်ခြင်း (သို့) တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ထိုမျှမက အပျော်လွန်ကဲခြင်းသည်လည်း အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်စိတ်ခံစားချက်များကို အိပ်ရာမဝင်ခင်(၂)နာရီခန့် ကြိုတင်ရှင်းလင်းထားပြီး … Read more
သီတင်းကျွတ်လအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ (17.10.2020)မှ (14.11.2020)အထိ
သီတင်းကျွတ်လအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁)ရက်နေ့(17.10.2020)မှ သီတင်းကျွတ်လကွယ်နေ့(14.11.2020)အထိတစ်လတာလုံး “သရက်ရွက် (၃)ရွက်ကိုသေချာသန့်စင်အောင်ဆေး​ကြောပြီး ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ်တွင် ဖြန့်ခင်းထားပါ။ ထို့နောက် သရက်ရွက်များပေါ်၌ ​နှမ်းဆီဖြင့်ဆီမီးထွန်းညှိထားသောမြေခွက်ကိုတင်တာမိမိအိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရိုသေစွာဖြင့် ထွန်းညှိပူဇော်ပေးရပါမယ် ခင်ဗျ…။ နှမ်းဆီဖြင့်ဆီမီးပူဇော်ရာ၌ မြေဆီမီးခွက်မရှိရင်လည်း မိမိအတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေမည့် ဆီမီးခွက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် စတီးခွက်နှင့်လုံးဝ ဆီမီး မပူဇော်ရပါခင်ဗျ။ အချိန်= နံနက်၆နာရီမှ၁၀နာရီအတွင်းဆီမီးထွန်းပေးပါ အောက်ပါ ဂါထာတော်ကို (၁၆)ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်ပေးရပါမယ်။ ” ဥုံ ပထဗျာ အာကာသေ ပဗ္ဗတေစေဝ ဥဒကေ ဝနေ ယံယံ ပတ္တံ ပဝါဒေမိ သဗ္ဗ လာဘသိဒ္ဓိ ဥပေတုံမေ။” ဆုတောင်းစာ “အကျွန်ုပ်နှင့်တကွ အကျွန်ုပ်၏တစ်မိသားစုလုံး သီတင်းကျွတ်လ တစ်လတာအတွင်း ကိုယ်ရောကျန်းမာ၊ စိတ်ရောချမ်းသာစွာဖြင့် မကောင်းသော အညံ့အပ၊ အတိုက်အခိုက် များ မှန်သမျှ ကင်းရှင်းစေပြီး … Read more
*သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ*လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ ကြာပါပြီ။ကြည့်စမ်း ငါ့သားသမီးတွေ ဘယ်လောက်ချောလဲ။ ကျန်းမာရေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ဖျားနာနေတာ မင်းတို့မြင်ဘူးလာ။ဉာဏ်ရည်ဆိုတာလည်း ငါ့သားသမီးတွေ ကျူရှင်တောင်မယူနိုင်ဘူး။ ရွာကနေ ကျပ်ပြင်ကျောင်းသွားတတ်နေရတာ။မင်းတို့စဉ်းစားကြည့် မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ သုသာန်တစ်စ သင်္ချိုင်းဝက လူသေလွှမ်းတဲ့အဝတ်တွေ ကောက်ယူတော်မူပြီး ပံ့သုကူသင်္ကန်းချုပ်ပြီး သုံးဆောင်တော်မူသေးတာ မင်းတို့ငါတို့လို ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကောင်တွေက ရှောင်တယ်ဆိုတာ ရယ်စရာကြီးကွ။ ကျောင်းစကိုရှောင် မသာစကို “ဆောင်”ဆိုတဲ့အဆိုလည်းရှိသားပဲကွာ။ကျောင်ပစ္စည်းယူသုံးရင်သာ အပြစ်ရှိမယ် သင်္ချိုင်းပစ္စည်းယူသုံးရင် အပြစ်လုံးဝမရှိဘူးကွ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်္ချိုင်းဆိုတာ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ … Read more
သငျ့​အသကျ​ ဘယျ​​လောကျ​လဲ? ဘာ​နေ့​မှေးလဲ? သာ ပွောပါ…မှနျလှနျးလို့ ထပျခါ ထပျခါ ဖတျဖွဈတဲ့ ဇနကဟောကိနျး
ခုလိုအခြိနျမှာ အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဂငျြး နဲ့ ဒီလို သနျ့ရှငျး ဆေးကွောပေးပါ…
အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်း နဲ့ ဒီလို ရှင်းလိုက်ပါ… အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ ကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှား မ လဲ…? လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေဆိုရင် အဆုတ် ကို သတိထားပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ ဂျင်း – ဂျင်းကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ဂျင်းမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ … Read more
သနပ်ခါးကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ…
သနပ်ခါး ကြိုက်တဲ့ မိန်းခလေး တွေ သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတ လေးပါ… မေမေ ပြောပြတဲ့ ပျိုမေ တို့အကြိုက် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ် သနပ်ခါး ကျောက်ပြင် အသစ်ဆိုရေလေးဆေးလိုက်ပြီးသနပ်ခါး တုံးသွေးထည့်လိုက်တာပဲအဲသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး…။ ကျောက်သား အစစ်ကိုထွင်းထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ် ဖြစ်ဖြစ် ဘိလပ်မြေ လိုမျိုးကိုပုံပြု့ထားတဲ့ကျောက်ပျဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးမပြု့ခင်မှာဝယ်လာတဲ့ကျောက်ပျဉ်ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး ကျောက်ပျဉ် ကိုရေပုန်းထဲကိုထည့်ပြီးရေနဲ့တစ်ညစိမ်ထားပါနောက်တစ်ရက်မှာနနွန်တက်နဲ့ဆီ+ဆားနဲ့ကိုသွေးပြီးတစ်နေကုန်နေလှမ်းထားရပါတယ်…။ ဆီခြောက်တော့မှသနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုရေထပ်ဆေးပြီးမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သနပ်ခါးတုံး ကိုသွေးရပါတယ် ထွက်လာတဲ့ သနပ်ခါး ကလေးတွေကညက်နေပြီး တစ်နေကုန်ပါးပြင်ပေါ်အရာထင်နေပါယ်တဲ့ကဲ ကျောက်ပျဉ်အ သစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြု့ရသလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့…။ မေမေပြောပြတယ် ကျောက်ပျဉ် ပေါ်သနပ်ခါး သွေးတာ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုလုပ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ ဒါပေမဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ချသွေးရတာမဟုတ်ပဲ မိမိခါးအလည်လောက်အမြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးသွေးရမယ်တဲ့ သနပ်ခါး ကိုအားစိုက်သွေးနေရတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေယ်လို့မထင်ရပေမယ့် နှစ်နဲ့ချီပြီးနေ့စဉ်သွေးနေရတော့လက်မောင်းကြွက်သွားတွေကပိုပြီးသန်မာတယ်…။ ပျော့ပြီးရွဲကျခြင်းမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်ညာတော့လှည့်သွေးပေါ့တဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း တာလဲအတူတူပဲတဲ့ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ရေအိုး ရွက်တာပါတဲ့ မေမေ အမေ(အဖွား)ပြောပြတာလို့ပြောတယ်…။ #မိုးမခ Unicode Version … Read more
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ အကွောငျး ကောငျးကောငျးသိနိုငျတဲ့ ထငျရှားတဲ့ မှဲ့ (၇) မြိုး အကွောငျး နှငျ့ ၄ငျး မှညျ့ပိုငျရှငျမြား ဆောငျရနျ ရှောငျရနျမြား
အမျိုးသမီးများရဲ့ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနိုင်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့ (၇) မျိုး အကြောင်း ဒီလိုပါ ခင်ဗျာ….မိန်းကလေးတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့(၇)မျိုးရှိတယ်လို့ မှဲ့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျမ်းတွေမှာဆိုကြပါတယ်။ အဓိက မှဲ့တွေပေါ့။ အဲဒီ မှဲ့ (၇)မျိုးက ဘာတွေလဲဆိုတော့… ရတနာရွှေအိုးလို့ ခေါ်တဲ့မှဲ့ရယ်။ ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ် (ဘယ်ဘက်) မျက်ရည်ခံမှဲ့ကြီး (ညာရယ်) နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ စံပယ်တင်(ညာဘက်) မှဲ့ရယ်ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက် အထင်ကရ မှဲ့ (၇)မျိုးရှိတယ်။ ၁။ ရတနာရွှေအိုးမှဲ့ အဲဒီမှာ ရင်ဘတ်အလယ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား မှဲ့တစ်လုံးတည်း ထင်းထင်းကြီး ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကို ၇တနာရွှေအိုးလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီမှဲ့ ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာလေ့ ရှိတယ်။ … Read more
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ မှဲ့ပါတဲ့ သူတွေရဲ့ အမူအကျင့်များ…